Dowladda Kenya Qabqable Cabdi Nuurre u Soo gacan gelisay Dowladda Federaalka Soomaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 7 March 2016
Muqdisho ( Mareeg)-Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa loo soo gacan geliyay Siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad.
Cabdi Nuure oo ku sugnaa Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa dowladda Kenya oo qabatay waxa ay ku soo wareejisay dowladda Federaalka Soomaliya.
Wararka ayaa sheegaya in Mr Cabdi Nuure Siyaad laga soo dajiyay Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kaga hortageen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Federaalka Soomaliya , Saraakiil iyo masuuliyiin.
Si kastaba Cabdi Nuure oo haatan Maxbuus u ah dowladda Federaalka ayaa Magaalada Muqdisho waxa uu ka baxay bartamihii sanadkii 2014 , xilligaas oo howlgal ka dhan ah Ciidamo kuwa nabad sugida gurigiisa ay ku qaadeen.
Wixii ku soo kordha xariga Cabdi Nuure Siyaad halkaan